Waxay ka Farxisay Aabbaheed iyo Yehowah | Carruurtaada Wax Bar
Waxay ka Farxisay Aabbaheed iyo Yehowah
Yeftaah ballantee buu Yehowah u qaadaya?
Gabadhii Yeftaah waxay sameysay ballantuu aabbaheed qaaday si walba ay u adkeed
Ma u jeeda gabadha sawirka ku jirta?— Nin la dhaho Yeftaah baa dhalay. Magaceeda Kitaabka inoo ma sheegin. Laakiin waxaan ognahay inay ka farxisay aabbaheed iyo Yehowah. Bal gabadha Yeftaah iyo aabbaheed aan wax ka baranno.
Yeftaah nin fiican buu ahaa oo gabadhiisa waqti badan buu la qaadan jiray siduu Yehowah u baro. Wuxuuna ahaa hoggaamiye fiican iyo nin xoog badan. Saas awgeed markay reer binu Israaʼiil cadowyadoodii la dagaalayeen waxay weyddiisteen inuu madaxoodii noqdo.
Yeftaah wuxuu u tukaday inuu Ilaahay ku liibaaniyo dagaalkii. Yeftaah hadduu guuleysto wuxuu ballanqaaday inuu Yehowah siin doono qofka ugu horreeya oo gurigiisa ka soo baxa. Qofkan noloshooda inta ka hartay taambuugga Ilaahay bay degganaan doonaan oo ka shaqeyn doonaan. Waqtigaas taambuugga wuxuu ahaa meeshii ay dadka Ilaahay ku caabudi jireen. Haddaba Yeftaah dagaalkii wuu rayay! Markuu soo laabtay yaad u maleysaa inuu ka soo hor baxay gurigiisa?—
Waxay ahayd Yeftaah gabadhiisa tii keliya uu dhalay! Haddaba Yeftaah aad buu uga caloolxumaaday waayo inuu iska diro bay ahayd. Laakiin ha illoobin ballan buu qaaday. Isla markiiba gabadhiisii waxay ku tiri: ‘Aabbe ballantaad Yehowah u qaatay waa inaad ka soo baxdid.’
Sanad walba gabadha Yeftaah waxaa soo booqon jiray saaxiibbadeed
Gabadha Yeftaah markay taambuugga aaddo ma guursan karin carruurna ma dhali karin. Sidaas daraaddeed iyada xitaa way caloolxumaatay. Laakiin waxaa u muhimsanaa inay aabbaheed ballantiisa sameyso oo ay Yehowah ka farxiso. Marka gurigeeda way ka tagtay oo nolosheeda inta ka hartay taambuuggii bay degtay.
Maad u maleysaa Yehowah iyo aabbaheed inay ku farxeen waxay sameysay?— Haa way ku farxeen! Haddii ad hooyadaa iyo aabbahaa dhegeysatid oo ad Yehowahna jeceshahay waxaad noqon karta sidii gabadhii Yeftaah. Adba Yehowah iyo waalidkaagaba waad ka farxin doontaa.
Sharciga Kunoqoshadiisa 6:4-6
1 Korintos 7:37, 38
Yeftaah yuu ahaa? Ballantee buuna qaaday?
Gabadhii Yeftaah maxay ugu adkeed inay aabbaheed ballantiisa sameyso?
Muxuu ahaa waxa ugu muhimsan ay Yeftaah gabadhiisa rabtay inay sameyso?
Sidee baad u noqon karta sidii gabadhii Yeftaah?
Wadaag Wadaag Waxay ka Farxisay Aabbaheed iyo Yehowah